Muwaadin Mareykan ah oo qirtay in uu Shabaab katirsanaa – XAMAR POST
Muwaadinkani oo u dhashey Mareykanka ayaa si toos ah u qirtay in uu ku biiray Al-Shabaab,islamarkaana uu u safray Soomaaliya si uu uga helo tababar maleeshiyada Al-Shabaab.
Ninkaan ayaa la sheegay in uu sidoo kale taageero Maaliyadeed uu siiyay Al-Shabaab,kadib markii la soo taagay maxakamada ku taala Mareykanka gaar ahaan magaalada Newyork,taasi oo in muddo ah baaritaan ku haysay ninkaasi qirtay argagixisanimada
Waxaa lagu magacaabaa Maalik Alim Jones, oo da’diisu tahay 32-jir,wuxuuna xusay in uu doonaayo in dhammaan dambiya laga qafiifiyo xukunkooda, maadaama uu qirtay kahor inta uusan hor imaan garsooraha degmada District Paul Paul Gardephe ee Manhattan.
Mareykanka ayaa sheegay in uu Maalik Alim Jones uu Soomaaliya yimid islamarkaana ku biiray koxda Shabaab, sanadkii 2011,wuxuuna la shaqeynayay ilaa 4 sano.
Wuxuu ka soo tagay magaalada Baltimore ee Gobolka Maryland ee Dalka Mareykanka,sanadkii 2015 ayaa waxaa gacanta ku dhigay hay’adaha amaanka Soomaaliya xili uu u safrayay dalka Yeman taasi oo sahashey in Mareykanka uu xabsiga dhigo maxakamadna la soo taago.
Go’aanka maxakamadeynta Mr Maalik Alim Jones ayaa lafilayaa in la soo geba gebeeyo 25 January 2018,waxaana uu wajihi karaa xabsi dhan 30 sano.
Trump oo digniin kama danbeys ah udiray xukumadda Pyonyoung